Cabdi Kuus Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Cabdi Kuus Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
Howlgal gaar ah oo ciidamo ka tirsan xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ay maanta ka fuliyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waxay ku dileen mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan magaalada caasimadda ah.
Xoogagga jihaadiyiinta waxay howlgalkan si gaara kaga fuliyeen agagaarka School-ka Dhagaxtuur degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxayna ku dileen Cabdi Kuus oo ahaa sarkaal ciidan oo ka tirsanaa saraakiisha sare ee millatariga kooxda Farmaajo.
Dilka sarkaalka ka dib waxaa goobta soo gaaray maleeshiyaad kale kuwaas oo goobta ka qaaday maydka sarkaalka ay Mujaahidiintu dileen waxaana goor dambe goobta si nabdoon kaga dhaqaaqay xoogaggii shabaabul Mujaahidiin ee howlgalka fuliyay.
Howlgalkan fariidka ee lagu dilay Cabdi Kuus oo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka millatariga waxa uu kusoo beegmayaa xilli uu faraha ka baxay amni xumada ka jirta magaalada Muqdisho howlgallada Mujaahidiintuna ay si habsami leh uga socdaan degmooyinka gobolka Banaadir.